Nezve JCT - Taizhou Jingchuan Electronics Technology Co, Ltd.
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co, Ltd. ikambani yetsika tekinoroji inoshanda mukugadzira, kutengesa, uye kurenda kwemotokari dzekushambadzira dze LED, mota dzekushambadzira, uye nhanho dzemotokari dzepamba.
Iyo kambani yakavambwa muna 2007. Iine huwandu hwayo hwehunyanzvi uye hunyanzvi hwekukura mumagetsi ekushambadzira eLED, maTrailer ekushambadzira uye zvimwe zvigadzirwa, yakakurumidza kubuda mumunda wekunze nhepfenyuro nhepfenyuro uye iri piyona mukuvhura LED kushambadzira mota indasitiri muChina. Sezvo mutungamiri weChina yemotokari yemidhiya yeChina, Taizhou Jingchuan akazvimiririra akazvimiririra uye akanakidzwa anopfuura makumi matatu emagetsi ehunyanzvi. Iyo inogadzirwa yakajairwa ye LED kushambadzira mota, traffic traffic LED kushambadzira mota, uye moto kushambadzira mota. Zvigadzirwa zvinosanganisira zvinopfuura makumi matatu emamodeli emota senge marori eLEM, matrailer e LED, nhanho dzemotokari nhanho, materu ezuva ezve LED, midziyo yeLED, matrailer ekutungamira uye akagadziridzwa screens emota.
Muna Kurume 2008, kambani yedu yakapihwa iyo "2007 China Kushambadza Nyowani Mipiro yeMipiro"; muna Kubvumbi 2008, yakapihwa iyo "High-tech Mubairo weKutungamira China Kunze kweMedia Progress"; uye muna 2009, yakapihwa zita rekuti "2009 China Brand uye Kokorodzano Musangano 'Brand Contribution Award' inokanganisa Chinese Enterprise Brand Star".
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co, Ltd.iri iri muTaizhou, mudunhu reZhejiang, iro guta rakanakisa kurarama muChina. Taizhou iri pakati pegungwa reZhejiang Province, padyo negungwa reEast kumabvazuva, nharaunda yakanaka. Kambani yedu iri muTaizhou yezvehupfumi nzvimbo uye ine nyore mvura, nyika nemhepo kutakura. Boka redu rave paakavapa "Taizhou Key Enterprise pamusoro Cultural Export" uye "Taizhou Key Enterprise pamusoro Service Industry" kubudikidza Taizhou matunhu neminisiparati hurumende.
Zvivakwa zvekambani zvine chekuita nezve kugadzirwa zviri zvemberi, zvakakwana, uye panguva imwechete zvine marudzi ese epamberi ekuyedza michina uye zviridzwa. Iyo kambani ine inobudirira manejimendi timu uye R&D timu, inotarisana nesumo uye kudzidziswa kwevakuru vehunyanzvi vashandi uye nyanzvi. Nesimba rakasimba rekutsvagisa sainzi, kambani yedu yakagadzika mashopu emusangano, makamuri ekutungamira uye nzvimbo dzeR&D Parizvino, kune dhipatimendi rekugadzira tekinoroji, dhipatimendi rekuongorora mhando, dhipatimendi rekutengesa, dhipatimendi rekutengesa, dhipatimendi rebasa rekutengesa, dhipatimendi rezvemari nemamwe madhipatimendi.
Iyo kambani inonamatira kune yemhando mutemo mutemo we "Shanu nyeredzi mhando, kutsvaga hunyanzvi kubva kuzvokwadi". Kubvira payakavambwa muna 2007, chigadzirwa chigadzirwa uye uye mushure mekutengesa sevhisi zvakakwirira kwazvo kupfuura zveindasitiri imwechete. Iyo kambani ine yakakura kukura yekunze yekutengesa timu uye nyanzvi mushure-yekutengesa technical service timu. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi mashanu nenharaunda dzakaita seEurope, United States, uye Middle East. Kwemakore, zvave zvichigutsa vatengi neepamusoro-inoshanda uye emhando yepamusoro masevhisi.
Jingchuan Mishoni: Rega kona dzese dzenyika dzifarire mabiko ekuona
Jingchuan Standard: Kugadzira, Kutendeseka, Kubudirira uye Win-kuhwina
Jingchuan Kutenda: Hapana chinhu munyika chisingagone
Jingchuan chinangwa: Kuvaka iyo yepasi rose mhando mumunda we mobile mobile advertising mota
Jingchuan maitiro: kushinga uye nekutsanya, chengeta vimbiso
Jingchuan Management: Chinangwa uye mhedzisiro-yakatarisana
Panguva imwecheteyo, Jingchuan anga achinamatira kune inoenderera tekinoroji yekugadzira kuti igadzire kukosha kwevatengi, iyo inoonekwa sosi sosi yehutano hwebhizinesi. Jingchuan akakunda kuvimba nekushandira pamwe kwevatengi pasirese nekuwedzera kwayo kugona kugona, yakanakisa inochinja maitiro ekugadzirisa uye nekuwedzera kugona kugona.
Tatarisana nemikana mitsva nematambudziko, Jingchuan ichaenderera mberi nechinangwa cheayo chekambani "kugadzira humambo hwebhizimusi pamavhiri", yakatsunga kuve yakazara yekupa sevhisi sevhisi yemotokari-yakakwidzwa midhiya kuChina. Yakadzika-tsvagurudzo uye kusimudzira kweMA media media mota, rezuva LED matrailer uye zvimwe zvigadzirwa, kuitira kuti vaite mupiro wakaderera mukuvandudzwa kweChina emabhizinesi emunyika.
Akatungamirira Mobile Rori, Mobile Yakatungamira Screen Rori, Akatungamira Nhare Yekutengesa, Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori,